कति छ “बाहुबली” नायक प्रभासको सम्पत्ति ? | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
कति छ “बाहुबली” नायक प्रभासको सम्पत्ति ?
दक्षिण भारतीय फिल्म “बाहुबली”को सफलतासँगै चर्चामा आएका प्रमुख पात्र हुन् प्रभास । अहिले प्रभासको नयाँ फिल्म “साहो” प्रदर्शन भइरहेको छ । “बाहुबली”सँगै प्रभासको करिअर उचाइमा पुग्न सफल भएको हो ।
प्रभासको पूरा नाम सत्यनारायण प्रभास राजु उपलापति हो । उनी निर्माता सूर्य नारायण राजु उपलापतिका छोरा हुन् । सन् १९७९ मा जन्मिएका प्रभास पेशाले एक्टर भएपनि पढाइ इन्जिनियरिङमा गरेका थिए । उनले २२ वर्षको उमेरमा तेलूगु फिल्म “इश्वर”मा डेब्यु गरेको हुन् ।
उनी एउटा फिल्म खेलेबापत २१ देखि ३० करोड भारतीय रुपैयाँ लिन्छन् भने उनको वार्षिक आम्दानी ३.२ मिलियन डलर रहेको छ । उनको नेटवर्थ १९.१-२४.५ मिलियन डलर रहेको छ । उनले सन् २०१६ मा ७ करोड ट्याक्स तिरेका थिए ।
बाइक र कारको सौखिन प्रभाससँग ७ लाख भारतीय रुपैयाँको होन्डा सिभिआर ६०० आरआर बाइक, १.४४ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने मर्सिटिज बेन्ज एस-क्लास, २.८२ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने कस्टम रेन्ज रोभर, १.२४ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने जागुएर एक्सजे-एल र ८ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने रोयल्स रोयस फ्यान्टम कारहरु छन् ।
उनी आन्ध्र प्रदेशमा ६ हजार वर्गफिटमा फैलिएको जुभिन हिलको एक आलिसान घरमा सपरिवार बस्ने गर्दछन् ।
काठमाडौं, ३ माघ । गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीसँगको लफडाले धक्का लागेको छ । आफूलाई विमानस्थलमा
मुम्बई, माघ ४ । बलिउड अभिनेत्री कृति सेनन आफ्नो नयाँ फिल्म ‘मिमी’ का कारण चर्चामा
काठमाडौं, माघ ४ । लगातार पाँचवटा फिल्म फ्लप भएपछि स्वघोषित ब्रेकमा रहेका बलिउड सुपरस्टार शाहरुख
जेनिफरको ‘बोल्ड लुक’ चर्चामा
काठमाडौं, माघ ४ । हलिउड अभिनेत्री जेनिफर लोपेज अभिनयको कारणले मात्रै होइन, आफ्नो बोल्ड लुकका